Arena of Valor - Myanmar, 4583 Bicetown Road, New York, NY (2021)
Home > United States > New York, NY > Arts & Entertainment > Arena of Valor - Myanmar
ဘယ်သူတေရှိလဲ add ပေးပါအုံး
😭ကူညီကြပါအုန်ဗျ gameထည်း၀င်မရတော့လို wifiနဲ့လဲ updateလုပ်လဲ၀င်မရဘူးဗျာ ကူညီကျပါအုန်း🙏🙏
ဘယ် items နဲ့
OMG i get free
ဒီဂိမ္းက ဂိမ္းသံမထြက္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ေျဖေပးၾကပါ
Asia server to South Asia server Transfer Tips
Transfer Period 17.6.20~30.6.20
1. Setting >General >Logout ကိုနှိပ်ပါ
2. Change > South Asia ကို​ရွေးပါ
3. အရင် FB ဖြင့် Sign in လုပ်ပါ
4. Name အသစ်​ပေးပါ > Tutorial. အကုန်ပြီး​အောင်​ဆော့ပါ
5. 5v5 mode ၃~၄ ပွဲ​ဆော့ပြီး Acc ကို Lvl5ထိတင်ပါ
6. [ Ingame ] မှာ Transfer Step 1 Step2​ပေါ်လာလိမ့်မည်
7. Step 1ကိုနှိပ်ပြီး. FB. ဖြင့် Log in ဝင်ပါ CDkey. Copy လုပ်ပါ
8. Step 2ကိုနှိပ်ပြီး CDkey ကို Paste လုပ်ပါပြီး OK နှိပ်ပါ
9. Processing ​ပေါ်ပြီး Suceed ​ပေါ်လာလိမ့်မည်
10. Ingame Mail မှာ ကိုယ့် Transfer လို့ ရတဲ့ Item အကုန်ပြန်လက်ခံပါ (Acc lvl, Heroes, Skins, Gold, Gems, Arcana, Vouchers, Magic Crystals Only)
Things not included in Transfer (｡•́︿•̀｡)
1. Seals of King _(:D)∠)_
2. Arcana Page
3. Codex bought
5. Rank tier
6. Lucky points
7. Hero ingame Costume/Animatiom
8. Other Things in Bagpack like Hero/Skin Tokens, Killing effects, Recall effects, Rank cards, Events' tokens etc.
PS: South Asia Server is [[[[ Lag ]]]] while playing with most net operators of Myanmar, Ping range (150~250ms).
Hope AOV Developers can fix it/upgrade server (ง •̀_•́)ง
It is our Arena Of Valor !!! Lets have fun together !!!!
Welcome to all AOV players from AOV Myanmar �
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၀င် ၅၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ မင်းတပ် တိုက်ပွဲအခြေအနေ
🚨 မြောက်ဥက္ကလာနဲ့ပက်သတ်ပြီး link စုထားခြင်းပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီနိုင်တဲ့သူများရှိရင် လာကူညီပေးကြပါ။ 🙏
Crd: Thu Htoo San
မြောက်ဥက္ကလာမှာ ‌သူပုန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေက စက်သေနတ်တွေပါသုံး ပြီး လူလိုက်သတ်နေပါတယ် ဘယ် သတင်းမီဒီယာမှ မရှိ/မသိကြပါ။မ/ဥသားတွေက တစ်ခြားနေရာတွေက ဒဏ်ကို မျှယူဖို့ အသက်နဲ့ရင်းပေးထားကြတာပါ။ မ/ဥကို ထိတော့ ကယ်မယ့်သူမရှိကြတော့ဘူးလားဗျာ။ မစာနာတာမဟုတ်ပေမယ့် တခြားနယ်က သတင်းတွေလောက် လူမသိသလို တက်ကို မတက်လာတာပါ။ ရင်နာတယ်ဗျာ။ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပေးကြပါဦးဗျာ
ဒီနေ့မှာ ချီတက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြကြမည့်သူအားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ငြိမ်းချမ်း ကြပါစေ ..
ဓမ္မ က သာ အနိုင်ရပါစေ ...
FEAR IS A HABIT , WE ARE NOT AFRAID
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများမဟုတ်သော်ငြားလည်း Civil Disobedience လုပ်နေကြသော နယ်ပယ်အရပ်ရပ်မှ ပြည်သူဝန်ထမ်းများ၏ အသံနှင့်အတူ တစ်ထပ်တည်း ရပ်တည်သွားပါမည်။
🔴 စစ်အာဏာရှင်စနစ် မုချ ကျဆုံးပါစေ!
Mist Island animated video မှာ Airi ,Qi ,မကြာခင်ထွက်ရှိလာမဲ့ New Hero Aoi တို့နဲ့အတူ နောက်ထပ်hero အသစ်ကိုပါ သတိထားမိကြမှာပါ။
ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ New Hero -Aoi ရဲ့ Comic lore မှာ တော့ သူ့ရဲ့အကြောင်းတစိတ်တပိုင်းပါဝင်လာပါတယ်။
New Hero - Tachi
Role - Warrior/Assassin
Ding Ding Ding ! 💫Tel'annas - Dream Princess Costume Trailer 💫
💫Tel'annas - Dream Princess Costume Trailer 💫
💢New Costumes trailer 💢
Raz & Capheny costumes ‌ကတော့ Xeniel codex costumes အနေနဲ့လာမှာဖြစ်ပြီး Laville & Airi costumes ကတော့ CNY special costumes များဖြစ်ပါတယ်
💢(8) New costumes Splash Art 💢
Trailer I Murad & Yena 💓 💞Xeniel codex- 25💞
Trailer I Murad & Yena 💓
💞Xeniel codex- 25💞
Murad & Yena
Valentines special skins Fan Art
Watch me stream Call of Duty on Omlet Arcade!
💞2021Valentine special Skin 💞
Watch me stream Arena of Valor on Omlet Arcade!
asia ဝင်မရတုန်း Indo Rank မယ်
💠 SEASON-17 LIFE STEAL META ??? 💠
Update အပြီးမှာ Rank Season -17ကို စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Update ရဲ့ patch note မှာ life steal item တွေကို nerf ခဲ့သလို HP regen မြင့်တဲ့ hero တွေ innate skill set life steal hero တွေအပေါ် counter ထောက်တဲ့ Anti-heal item တွေကိုလဲ nerf ခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် Kil’Groth , Lubu , Allain, Arum တို့အပြင် အခု update မှာ buff ထားတဲ့ mganga , sephera , Marja တို့ဟာ season အသစ်မှာ ပိုပြီး popular ဖြစ်လားမှာလား ဆိုတာ???
💫Bow of Slaughter💫
💫Tome of the Reaper💫
💠ADJUSTED ITEMS 💠
✨Curse of Death✨
【AoV Offline Notice】
AoV will be offline at 10:50 (GMT+8) on January 21st for maintenance, and the expected re-open time is 18:00 (GMT+8) on January 21st.
မြန်မာအချိန်နဲ့ဆိုရင် 21-1-2021 (9:20Am) ကနေ ညနေ(4:30Pm) ထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ် ။အဲဒီ့ထက်လဲပိုကြာချင်ကြာနိုင်ပါတယ်။
* Beta(29 )Update Content မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့
* 1) Hero Revamp: Airi The Kunoichi
* 2) New Game Mode: Duo Race
* 3) New Relationship System
* 4) New Targeting Mechanism
* 5) Improvements on Emoji System
* 6) Improved Camera Indicator
* 7) Overall UI improvement
* 8)Balance Adjustments
* 9) Bug Fixes & Performance Improvements
* ...and more တို့အပြင်
Rank Season 15 ပါပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီး Season 16 ကိုပါစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Update မှာ Revamp hero Airi strong ပိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး Superman ကလဲ lvl (1) skill အပြောင်းအလဲအတူ ပိုကြမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ Wukong ကြမ်းလာပါလိမ့်မယ် ။
Mage ထဲမှာတော့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ AOV queen - Sephera ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
( Taiwan server ရဲ့update အပြီး heroes picking များကိုကြည့်ပြီး ကျနော်အမြင်အရပြောချင်သာဖြစ်ပါတယ်)
#ArenaofValor #AoV #MOBA #Games #JanuaryUpdate #MistIsland
⚡ Zanis - Royal Guard (In-game Trailer)⚡
✨ MIST ISLAND ✨
✨S17 Rank Reward Skin ✨
Arena of Valor - Myanmar's cover photo
လာမဲ့ update မှာ Relationship System ဆိုပြီး new feature တစ်ခုပါဝင်လာပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ intimacy level ကိုရောက်တဲ့အခါ Relationship system ကို access လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Relationship System မှာ Lovers , Besties, Brothers, Buddies စသည်ဖြင့်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ် ။
Lover မှာတော့ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ link လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး အခြားအမျိုးအစားများအတွက်ကိုတော့ (5)ယောက်နှင့်အထက်ထားလို့ရပါတယ်( Lover ကို တယောက်ထဲထားလို့ရတာတော့ အဆင်မပြေ 😅)
ကိုယ်နဲ့ relationship system ထဲမှာအတူ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို Special item တွေ Gift ပေးခြင်းဖြင့် Intimacy lvl ကို မြှင့်နိုင်ပါတယ် ။ System က record လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Been Together (...) Days ကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် Anniversary ရောက်တိုင်းလဲ special gift တစ်ခုကို ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါ့အပြင် Intimacy Exclusive Emoji , Title , Special effect Chat window စတာတွေကိုလဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ( သတ်မှတ်ထားတဲ့ intimacy lvl တွေရောက်တဲ့အခါ)
Intimacy Lvl များများတတ်ချင်ရင်တော့ lover နဲ့မဆော့သင့်ပဲ buddies , besties , brothers များနဲ့ဆော့သင့်ကြောင်း အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ( အကြံသာပေးရတာ ဆော်မရှိတဲ့ FA gamer တွေကများနေလားမသိ 😅)
KRIXI - White Swan Skin Trailer
KRIXI - 🦢White Swan Skin Trailer 🦢
👏Congratulations Team BNK 👏
(27.12.2020) - (4.1.2021) ထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Friendly Matches ပြိုင်ပွဲမှာ ✨Team BNK ✨က winner ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
Final (Bo-5) ကလဲ တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
⭐ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပေးခဲ့တဲ့ အသင်း (9)သင်းမှ player တိုင်းကိုလဲ fun matches ဖြစ်ပေမဲ့ တလေးတစား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်❤️
⭐ပြိုင်ပွဲ live streamတိုင်းကို ကြည့်ရှုပေးတဲ့ viewers & sharers ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
⭐ပွဲစဉ်အစအဆုံး စီစဉ်ပေးပြီး casting ပိုင်းကိုပါကူညီပေးခဲ့တဲ့ Admin Team မှ Sis Shwn Thader Aung , ပွဲစဉ်တွေဆွဲပေးတဲ့ bro Han Tun Zaw , Casting ပိုင်းအားဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ KG channel မှ bro Kyaw Linn Oo တို့ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
⭐⭐နောက်လာမဲ့ပြိုင်ပွဲများမှာတော့ ထိုက်တန်တဲ့ဆုကြေး‌များပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပွဲစီစဉ်မှုများကိုပါပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်⭐⭐
(P.S - 1vs1 ပြိုင်ပွဲတွေလဲ နောက်တပတ်ထဲစီစဉ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ )
caster အသင်းနာမည်မှားလို့ပါ‌ဗျ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ🙏
မနားတော့ပါတဲ့ ချက်ချင်းပဲ ချပါမယ်တဲ့
4583 Bicetown Road
Other Video Games in New York (show all)
Wearable Technology Conference 2014: How Wearable Computing is Revolutionizing Mobile Wireless Internet, Healthcare and Fashion
This is an ultimate gaming page. Will be fun, gaming out there. Audience comment will be prioritized. Moreover, spamming, hate speech is prohibited strictly.
Për çdo sygjerim që keni për faqën apo të postoni foto, ju lutem na shkruani në Message♥ Vërejtje: Ndalohen rreptësisht komentimet banale!
Muchos juegos , juguemos todos los juegos que podamos jugar ! desde HALO hasta super monkey ball ! disfrutemos jubtoas !
Fun games for smart people. www.freshplanet.com
⇝ Welcome to our channel! ⇝ Here you can find all kinds of gameplay videos. ⇝ PC Games, Mobile Games, Android Games & IOS Games. ⇝ Don't forget to like and share our videos. ⇝ You can also write us your comments about our videos.
Cuiida Bem Dela " Você Não Vaai Conheçe Alguém Melhor Que Ela "
New York, 0987654
♕ Bem Vindos *-* ♕ ✔ Page Original & Oficial ® ✔ Trocamos Divulgações. (10min) "Se nada dura para sempre, seja o meu nada, por favor. "
6 direction bros
When Boys Remember The Little Things About You.
Street 8 Brooldyn Street, New York, New York 10001
| Owner : Jαzzy | Goαl :3O.OOO Fαns | Code → @[427889960621493:0] |
1 Block St
Games Lovers is all about video games and fun place for games lovers.